Odyssey ine AMD chikamu1 | Kubva kuLinux
Odyssey ine AMD chikamu1
pandev92 | | Kugoverwa
Ini ndashandisa ese Mugovera nezuro Svondo ndichigadzirisa iyo PC uye kuyedza zvinhu zvakasiyana siyana uye kupatsanurwa kweGNU / Linux.
Kufanana nevashandisi vese veGMM, ndinofunga iwe unotoziva kuti mwedzi mishoma yapfuura rutsigiro rweGPU kumhanyisa ye h264, mpeg nezvimwe zvaburitswa, kuburikidza nevdpau uye izvo zvakare zveKernel 3.11 simba rekutonga simba (dpm), rinozopedzisira ita iyo mifananidzo kuti iite seyatsva nemutyairi wemahara.
Ndakagadzirira kuburuka Kubuntu 13.10 Alpha 2, Ndakagadzirisa, ini ndakaisa iyo PPA ye Xorg edgers uye ndaigona pakupedzisira kutamba mimwe mitambo yeSteam, zvakare nekukurumidza zvakanyanya kupfuura nemutyairi akavharwa.
Ini ndakaisa iyo Kernel 3.11 rc3, uye ini ndakamisikidza iyo DPM (inesimba simba manejimendi manejimendi) uye zvese zvakashanda nemazvo, kudzamara nguva nenguva iyo pc yakatanga kudzima iyo skrini kweanenge masekondi mashanu uye ndokuzodzoka, kudzamara kwave nerunyararo.
Dambudziko rakauya gare gare, PC yakabva yatanga kuitazve ..., ipapo ini ndanga ndatanga kunetseka, saka ndakaisa Kubuntu 13.04 ndikasiya neKernel 3.10.
Sezvo kusvika Kernel 3,11 iyo dpm isingakwanise kumisikidzwa, ini ndakaedza kumisikidza vdpau mune yemahara mutyairi, ini ndakanyora tafura ine mirawo inoenderana, ini ndakaisa iyo vdpau mapakeji uye hapana, haina kushanda.
Ndakarega uye ndikafunga kumirira, asi chimwe chinhu chisingazivikanwe chakaitika, pakarepo pandakatangazve PC, ndakatanga kugamuchira Kernel Panics, ndakapinda Kubuntu neKernel panic, ndakapinda mune imwe distro ine live usb uye Kernel kuvhunduka, ini ndaive kuisa Windows kuti uone kana iro raamai raive rapiswa kana chimwe chinhu chakatyoka.
Maawa mana mushure mekutyisa kwekernel zvakaitika kwandiri kuti ndiidzorere kumigadziriro yefekitori, dzima xboost uye uigadzirise kune imwe vhezheni. Pakupedzisira kutya kweKernel kwakanyangarika (ndinotenda Athena nekundibatsira XD).
Chekupedzisira, ndakafunga kuyedza zvakare kugadzirisa vdpau muKubuntu, ndakavhura shinda muPhoronix, ndakabvunza Michael iye (uyo asina kupindura xD), ndakabvunza muPhoronix's irc, ini ndakatevera rairo uye hapana, hazvina kushanda.
Saka ndakatanga kutsvaga yazvino distro iyo yaive neinenge ichangoburwa ndokusangana nayo Fedora 19. Ndakati nechemumoyo, ngatimbozamai, yanga iri kubva 16 vhezheni yandanga ndisati ndatomboitora. Ini ndaodhaunirodha vhezheni yacho KDE, Ini ndakagadzirisa zvese ndikaona posvo kubva kune yangu blocker shamwari Xenode Sisitimu izvo zvakandibvumidza kumisikidza iyo distro kuti ikwane kwandiri.
Iko kuno uko kutarisa mapakeji, ini ndawana tafura-vdpau-driver. Ini ndaifunga yaive yekumhanyisa pasuru yemumvuri, asi kana yaiswa ini ndinoona kuti yaive zvakare nekukwirisa h264, ndakaedza naMplayer naFlash uye ndinoziva kuti Mplayer iri kudya chete 1%, saka dambudziko rakagadziriswa.
Ikozvino kumirira Kernel 3.11 iyo inogona kunge iri munguva pfupi Fedora Uye nenzira yandinokurudzira kupa iyi distro kuyedza, iyi vhezheni haina kuita senge yakaipa senge yapfuura :).
Chikamu 2 chichauya panobuda Kernel 3.11.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Odyssey ine AMD chikamu1
Regerera kusaziva kwangu pamusoro penyaya iyi, asi ndinonzwisisa kuti kuisa mesa-vdpau-driver kunogadzirisa matambudziko etembiricha ayo madhiraivhi emahara eayo ma graph. Ini ndinobvumirana newe, Fedora 19 KDE inoshanda chaizvo, ndakaiisa mushure memamwe matambudziko neChakra uye ndiri kunyatsofara.
Aihwa! Zvinetso zve tembiricha zvinogadziriswa kana kernel 3.11 ichasvika nekuisa paramende radeon.dpm = 1 mu grub.
Tafura vdpau madhiraivha inogonesa h264 kumhanyisa ne gpu, sekunge yaive kadhi ye nvidia 😛
ndingati chii http://www.memegenerator.es/imagenes/memes/0/2280940.jpg
Kunyangwe ini ndisingashandisi amd izvozvi, zvakanaka kuti uzive yako misoro, kana mune ramangwana ini ndikavaka pc ine pure amd.
Ok, ini ndichachengeta izvo mupfungwa sezvo ini ndoda kuvaka pc
Pindura kuna davidlg
'Ini ndakaisa iyo Kernel 3.11 rc3, uye ini ndakagonesa iyo DPM (inesimba simba manejimendi manejimendi) uye zvese zvakashanda nemazvo, kudzamara nguva nenguva iyo pc yakatanga kudzima iyo skrini kweanenge mashanu masekondi uye ndokuzodzoka, kusvika paive paine nyarara. '
Iwe wakagadzirisa sei dpm?
kana yakashanda kekutanga iwe unofanirwa kunge wakatarisa tsime kana mafeni
ita tutorials pane zvauri kuita iwe zvaunowana
mashoko anoraira, maitiro
Pindura kuna 3
Wakawana sei iyo F18 yakaipa?
Zvakareruka sekungoita maviri kana matatu paive nechinhu chakapunzika, icho kana rhythmbox, iyo kana firefox yakaramba yakaturikwa kuti kana ziviso dzinofadza dzemhosho dzikaonekwa etc. Ini ndakaiyedza iwo iwo mwedzi wekubva.
Zvakanaka, zvinoita sezvakanaka kwandiri kuti anonongedzera asinganetsi matambudziko ake aakave nawo neADD. Kusvikira vanoverengeka vataura kuti madhiraidhi eamd anoshanda pamwe neiyo Intel mu linux (ayo akavhurika) ini handizotarise laptop ine amd processor.
Pindura kuna ben
Asi kana dambudziko risiri nemaCUU, iri nemaGPU ... dambudziko hombe nderekuwana mashandiro akanaka kubva kuOpenGL uye zviri pachena kuti hurongwa haupisi uchitsvaga zvakawanda uye uchipa zvishoma, kusvika pandakave nematambudziko ne AMD yakagara ichipisa! xd
Kune rimwe divi, nguva dzandakave neIntel yakashanda nemazvo, asi ichingoita zvinhu zvakareruka, kwandakaona mhedzisiro iyi yaive neLibreOffice iyo iine AMD uye ichishandisa Debian yaishanda zvishoma uye zvakaipa, pandakachinja kuita LinuxMint 14, zvakave zvirinani mukuita, kufambisa mameseji uye kuita zvinhu izvo neimwe (Debian) zvaisakwanisika ...
Pindura kuna maximi89
Asi iyo Intel iri pakakwirira kweiyo AMD kana NVidia? Ndokunge, iyo Hardware. Ini ndinobvunza kuti sei pamwe ndichivandudza zvishandiso zvangu (zvinova nemakore anodarika gumi nemaviri) uye ruzivo rwese rwunobatsira.
Kwete, padanho reNvidia harina kana kuswedera padyo, ndosaka intel + nvidia mifananidzo processor. Zvino kana isu tichienzanisa rutsigiro rweelchen neya amd ...
Jesu israel perales martinez akadaro
Ndiudze kuti kadhi rako remifananidzo iHD 4xxxx (ini handizive kuti mangani x ari xD) ini ndinoshandisa fedora uye iyo yekupisa nemwenje kwete zvekare: Ehe, zvandakaita kutevedzera url uye kuitamba muvlc xD, iyo tembiricha yakakwira zvishoma zvishoma D:
Pindura kuna Jesu israel perales martinez
Mune ino pc ndeye apu 7650d, mune iyo laptop kana iri radeon 4xxx xD uye inosvika 90 degrees ahaha, ndakatenga fan chete pamakumbo! muzhizha iro rinotonhorera pamakumbo uye ini ndichidikitira senguruve xd
Nechimwe chinhu ndakashamisika kuti sei Ubuntu yainonoka pamabhodhi epamusoro e AMD, uye ikati "AMD Drive Haitsigirwe".
Chinhu chakanaka ini ndinoshandisa Intel pane yangu Debian PC.
Rega ndione kana ndichiwana nemazvo.
Ko kernel 3.10 zvichienda mberi inogadzirisa dambudziko rekupisa kwakanyanya muATI 4.xxxx makadhi evhidhiyo nemutyairi wepachena?
Ndinoonga mhinduro pamberi.
Ernesto Manriquez akadaro
Ndakafamba kuburikidza naFedora nekuti ndaida kuyedza iyo DPM system uye yakashanda zvinoshamisa. Mamwe matipi.
1. Usambofa, asi usamboisa Fedora isina Fedora Utils. Tsvaga, download, dzvanya Next, Next uye Next, uye uchava zvose zvakagadzirira.
2. Kuti utore DPM nenzira kwayo ndinokukurudzira kuti umise zvidzoreso-kuyedza uye enda kunzvimbo ino.
Ikoko iwe unowana yazvino Rawhide kernel 3.11, isina zviratidzo zvekugadzirisa kuti zvirambe zvichikurumidza. Vanozvigadziridza mazuva ese matatu kana mana sekurongeka kunobuda. Dzimwe dzese dzekuti uwane DPM kumusoro (izvo zviri kunyanya kuisa radeon.dpm = 3 pane grub mutsetse) iwe unowana mune yakawanda howtos kunze uko.
3. DPM haisi mashiripiti. Zvisinei, DotA haimhanye pane kotari yekumhanyisa kweWindows, asi chimwe chinhu chinhu. Iko kuvandudzwa kukuru kunobva kuLlano, Trinity neBobcat APUs. Kana iwe uine Radeon HD 7800 uye kumusoro, kanganwa nezve Fedora uye shandisa Catalyst naChakra.
4. Kana uchizomhanya KDE, iine mahara Radeon uye DPM madhiraivha, saka inguva yekuti iwe ushandise hunyengeri hunoshanda chete ne KDE uye mahara Radeon (kana Intel) madhiraivha. Mukunyaradza, gadzirisa iyo .bashrc faira woisa zvinotevera.
kutumira kunze LIBVA_DRIVER_NAME = vdpau
kutumira kunze VDPAU_DRIVER = r600
kutumira kunze R600_DEBUG = sb
kutumira KWIN_OPENGL_WS = egl
Idzi tsvarakadenga dzinoita zvakasiyana siyana.
a) Iwo maviri ekutanga anoita kuti VDPAU dhata ishande, kutarisa HD mavhidhiyo pasina CPU mari. Yakakwana, pamusoro pezvose, yeiyo C uye E akateedzana APUs (ayo nenzira, anoshanda sedumwa neDPM)
b) Chechitatu chinogonesa kuyedza kwekuyedza mumumvuri compiler. Iyi kodhi nyowani inogona kuwedzera mashandiro muzvirongwa zve25D zvine mutsindo nemitambo kusvika pa3%.
c) Yechina inomutsa yekuyedza EGL backend yeKWin. Iyi sarudzo, iyo inongoshanda chete mune mahara madhiraivha, inoita KWin ishandise zvakanyanya kushomeka CPU, ichichengetedza iyo yakafanana fluidity.
Pindura kuna Ernesto Manríquez
Iwo manhamba ari muPhoronix, pane iyo AMD E-350. Chikamu chekutanga ndiUbuntu 13.04 stock (kumberi), yechipiri Catalyst, uye yekupedzisira mutyairi wepachena ane zvese zvinowedzeredzwa, DPM, uye yekuyedza yekuviga kodhi.
Ndiri kumirira iyo 3.11 kernel kuti igadzikane uye ndobva ndazama zvakare mahara madhiraivha! Ini ndinonyora matipi ako muevernote! Ndatenda.
Ndine komputa ine amd athlon2 x3 cpu uye amd radeon HD 5750 uye ndagara ndarega kushandisa GNU / Linux nekuti madhiraivha anogara achitadza, kana iyo system yese inopunzika kana iyo mitambo haina kunyatso tarisa kana kugona.
Pane mumwe munhu angandibatsira nechero mazano uye dzidziso?
Zvakanaka, ini handina kutambura kubva kune chero dambudziko rakafanana; Ndine Kubuntu 13.10 64 yakaiswa uye inoshanda mushe, ini ndaida kuisa Fedora 19 asi chikamu chemifananidzo hachina kundishandira kuisa kugovera uku, ndiyo yega yandinofanira kuyedza, saka sezvo ini ndave kutomhara chete ne Kubuntu.
Jose Jácome akadaro
Rwendo rwakajairika kune avo vedu vari Vashandisi ve AMD (uye zvakanyanya zvinosiririsa kune Vashandisi Vemifananidzo Vanoshandurika seni 🙁), asi chinhu chakanaka pane izvi ndechekuti tinogona kuramba tichiedza ... Kune rangu divi, ini handisati ndine tarisiro huru zvine chekuita nemifananidzo yeADD asi ini ndinovimba kuti MIR neWayland pamwe chete neKernel 3.11 zvinotipa imwe tariro !!!
Pindura José Jácome
Hapana chekuita, ini ndaifanirwa kudzokera kumashure, mutyairi wemahara uye anongokonzeresa zvandisingafungire reboots yepc ..., ndinofunga inofanirwa kunge iri nekuda kwekupisa asi zvedi iyo lm sensors haindiratidze tembiricha iyo apu ..., tsime handina kukwanisa kutaura…
"Ini ndobva ndatanga kutsvaga yazvino distro yanga iine inenge ichangoburwa ndokusangana naFedora 19. Ndakati nechemumoyo, ngatimbozamai, kubva parudzi rwe16 ndanga ndisati ndatomboitora."
«…. iyi vhezheni haina kuita senge yakaipa kwandiri senge yapfuura »
Kana iwe pachezvako uchibvuma kuti hauna kuritora kubva mushanduro 16, ungaita sei kuti uve nechokwadi chekuti yapfuura yaive yakaipa? Unozvitaurira wega here, kana kungonzwa runyerekupe?
Pindura ku deviltrol
Ini ndakakanganwa kuisa izvo kana ini ndikaedza vhezheni 18 pane live usb.
Zvikuru, ini ndanga ndichingo sarudza iyo distro yekuisa pane desktop pc iri ese AMD 😀
Ndine AMD E-450 uye ndine Sabayon 64 KDE yakaiswa, yatova iyo distro iyo yakave neakanakisa kuita mukushanda.
Che, ini handizive ... zvinoita kwandiri kuti nekuda kwedambudziko rekuratidzira kuenda kubva ku distro kuenda ku distro ..
Fungidzira kuti mu fedora unogona kuita nyonganiso yakafanana nekubuntu 13.04 mune ayo emangwana vhezheni. Saka uchaitei? chinja kubuntu zvakare? .. Mufaro.
Pindura kuna alunado
Zvakanaka, ini handizive, izvozvi handikwanise kana kushandisa Linux, iyo pc inotangazve yega 2 kana 3 maawa, ndega ... tichaona ...
Kde uye fedora mabhureki uye matinji xd
Pindura kune freebsddick
freebsddick yakashata xD
Ndichiri kurangarira odyssey yangu neATI yakabatanidzwa yakauya nePC yangu yazvino (iri munzira kuenda kumakore matanhatu). Ini ndaifanirwa kuunganidza vatyairi neruoko (Launchpad yanga isipo panguva iyoyo uye ndiyo chete nzira yekuve neyazvino vhezheni, zvimwe chete zvandakaita paPC yangu yekare yeNvidia), bata iyo Xorg faira kuti uite Compiz zvakanaka, nezvimwe .mwedzi mishoma, pakaburitswa Ubuntu 6, pandakaenda kune iyo peji reATI kunotora vhezheni yazvino, yakandiudza kuti girafu yangu haichabatsirwe neiyi nekuda kweshanduro itsva yeX.org (ipapo ndinotarisa modhi ndiko kuti, kuti hazviiti kuti ndiri paPC), saka ndakadzokera kuna 7.06. Mushure memwedzi miviri ndakatenga yangu Nvidia (an 6.10GS) uye yaive yakanaka kwandiri, uye ini ndaigara ndichishandisa yazvino vhezheni yemutyairi uye haina kumbondipa matambudziko.
Zvinotaridza kuti vatyairi veATI vakavandudza, asi zviri pachena kuti kana ndikawedzera komputa yangu, kana kutenga mamaboardboard eIntel ine mifananidzo yeIntel, kana Intel kana AMD ine Nvidia yakabatana.
Ndakafungidzira zvakare posvo ichinyunyuta, zvakare kubva ku AMD, asi ini ndinoona kuti magadzirisa dambudziko, kunyangwe zita racho richiita kunge kwandiri kutsvaga troll
Ndakagadzirisa nekuisa windows ... xD ..., parizvino ndakamirira kutsiva apu, iyo inofanirwa kusvika mangwana, asi huya, kana chinhu chimwe chete chikaitika neapu nyowani, inoramba ichitangazve uye zvakadaro , Ini ndichatora kurerutsa kuti ndakatarisana neakanaka bug kernel ini ndakatozvitaurira kuitira kuti xD.
Lol ... pakupera kwemwedzi ini ndinotenga APU yekupedzisira, iyo A10 6500K ndinofunga iri kana 6800, ndichaona kuti zvinofamba sei kana ndapedza kuvaka michina yangu, kana ndichitoziva ndanga ndisina kutenga iyo AMD / ATI asi mobo yaive 100 US $ uye yakauya neHDMI: 3
Zvakanaka, kushandisa madhiraivha eimba uye kudzivirira gnome shell xD ...
Zvinonakidza, ini ndichachengeta izvo mupfungwa. Ini pachangu, ini ndinoshandisa Ubuntu 12.04 yezvikwata zvangu, neUbatana nedoko, uye kazhinji Gnome kunyorera. Asi zvakanaka kuziva. Zuva rakanaka.
Pindura kune gorlok
Yuriy Istochnikov akadaro
Chinhu chakashamisa; nekuti kwandiri, shamwari Pandev, zvakaitika neimwe nzira kutenderera.
Iwo maratidziro ekombuta yangu ndeaya:
-HP Shanje M6-1105dx
-AMD APU A10-4600M & 6 GB RAM. Zvimwe zvese hazvidi kutsanangurwa.
Pandakagadza Fedora 19 pairi, icho chinhu chekukurumidza chakabika pamusoro. Ini handina kukwanisa kuiisa isina base ine mafeni matatu uye mune console mode (ini handisi kutamba); nepo Kubuntu 3, haina kukonzera kushamisika. Muchokwadi, ine yemahara mutyairi yakazvibata ZVAKANAKA zvakafanana neWinbugs 13.10 uye neCatalyst inozvibata BETTER pane neWinbugs 8.1. Muchokwadi, mukusashanda iri 8.1 ° C pasi pane payaive neWindows. Ini ndinotamba Kerbal (mutambo usina basa zvakanyanya mukubata multicore) paWine uye inokwira kungosvika 10-70 ° C.
-Iyi heatsink yeLaptop ndeye poop. Yakagadzirwa nealuminium uye haina kudzima shiti.
-Ndingade kuva nenzira yekuti fan izere kuitira kuti kunyangwe ndikashandisa mabhatiri akawanda, ndinogona kutonhorera yangu Velikaya Slava kupfuura letisi (ndisina hwaro nevateveri vashanu pazasi).
-Chinhu ichi chiri mukuda kwakanyanya kweiyo thermal paste paste; Ini ndichangotenga chubhu yeGelid GC-Extreme, inova ndiyo inokurudzirwa naTom's Hardware yerudzi urwu rwechinetso.
-Ngatitarisirei kuti Fedora 20 inouya nekernel neRadeon DPM inogoneka (iyo 19 haindibvumidze kuti ndigadzirise chinhu chakashata ndisina kufashaira; '(uye zvirinani «ERROR 090D; Sisitimu yako yaive nekudzimirwa kwemhepo»).
Pindura Yuriy Istochnikov
Kuuya nekukurumidza: Danai Vapepeti
GLIMPSE: a "SANDBOX" yeGNU / Linux